Murdoch University - KMUC
Murdoch University is recognised by the Australian government.
Murdoch University is in the Ministry of Manpower (MOM) (Singapore) acceptable institutions list.
The Pro-Vice Chancellor from Murdoch University is based in Singapore to oversee the academic aspects of the programmes and to ensureahigh standard of academic delivery both in Kaplan Singapore and Kaplan Myanmar. This is an exclusive arrangement by Murdoch University.
ကျွန်မနာမည် မြတ်မွန်ဖြိုးပါ။ လက်ရှိ Head of Treasury position နဲ့ Telenor Myanmar, Finance Department မှာ လုပ်နေပါတယ်။ MBA ကိုတက်ဖို့ ကျောင်းတွေစုံစမ်းနေတာတော့ တစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ Kaplan ရဲ့ Murdoch MBA ကိုရွေးပြီးတက်ဖြစ်တာကတော့ Kaplan ရဲ့ ကျောင်းခိုင်မာမှုရှိတာရယ်၊ Murdoch MBA က world top 100 စာရင်းဝင် ဖြစ်တာရယ်၊ သင်ရမယ့် Subject တွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး လက်တွေ့မှာ တကယ်ကို အသုံးဝင်နိုင်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ​ တကယ်တမ်းမှာလည်း သင်ကြားရတဲ့ ပညာရပ်တွေက တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး Leadership တို့ Business, Society and the Environment တို့ဆို… Read More “Myat Mon Phyo”
Myat Mon Phyoe
မင်္ဂလာပါ!! ကျွန်တော်ကတော့ ဇော်လွင်မိုးပါ။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ Murdoch University ရဲ့ MBA ကို Kaplan Myanmar University College မှာ တက်ရောက်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက MBA တွေမှိုလိုပေါက်နေပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာလို့ Kaplan Myanmar မှာ တက်ဖို့ စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ MBA Course တွေ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အချိန်အတော်ကြာယူပြီး MBA ကို အမျိုးအစား ခွဲခဲ့ပါတယ် ပထမဆုံး စဉ်းစားမိတာက Quality 💯💯 Quality အတွက်
www.timeshighereducation.com website အကူအညီနဲ့
Murdoch… Read More “Zaw Lwin Moe”
ဒီတပတ်မှာတော့ Murdoch University ၏ MBA ကို တက်ရောက်နေသည့် ကို Joseph Win နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ရင်တွင်းစကားသံတွေကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – လက်ရှိအလုပ်အကိုင်လေး ဖော်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။
လက်ရှိမှာ မိုးသီးဆေးခန်းနှင့် ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်မိုးသီးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ CEO အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
မေး – Murdoch MBA ကို တက်ရောက်ဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သိပါရစေ။
ကျွန်တော့် Career နဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး လိုအပ်တာကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ဆေးရုံဆေးခန်းလို အမှားအယွင်းခံလို့ မရတဲ့လုပ်ငန်းတွေ ဟိုတယ်လို Customer service ကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမျိုးတွေမှာ နည်းစနစ်ကျတဲ့ စီမံခန်ခွဲမှုပညာရပ်က လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တက်နိုင်မယ့် Quality… Read More “Joseph Win”
ကျွန်မ နာမည် Lach ပါ။ မီဒီယာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားပြီး ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ အခွဲတွေဖြစ်တဲ့ ဂန္ထဝင် မဂ္ဂဇင်း၊ ဂန္ထဝင် တယ်လီတို့ဆိုရင် ခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ Empowerment နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေးကို ခရီးရောက်နေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ စင်ကာပူမှာ Kaplan Singapore ကျောင်းတက်ပြီး သြစတြေးလျက Murdoch University မှာ မာစတာ ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစခဲ့တာ ခုဆိုရင် လေးနှစ်ခွဲ ရှိပါပြီ။​ ​ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်က မြန်မာနိုင်ငံက မီလျံနဲ့ ချီတဲ့ လူတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင်၊ အတွေးအခေါ်တွေ တိုးတက်အောင် ထိထိရောက်ရောက် ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းကို အဓိက သွားရတဲ့အခါမှာ အလုပ်က ဝင်ငွေရှာတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။… Read More “Lach”
Phyo Oo Han
Halliburton Myanmar Energy Services Pte., Ltd မှာ Senior Logistics Specialist အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ကိုဖြိုးဦးဟန်မှ Kaplan မှာ MBA ကိုရွေးချယ်တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံ ရင်တွင်းစကားသံများကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။ မေး- Kaplan Myanmar ကို ဘယ်လို သိခဲ့တာပါလဲ.. ?
ဖြေ- Kaplan အနေနဲ့ မြန်မာကိုရောက်လာတာကို Online ကနေသိခဲ့တာပါ။ Kaplan Singapore ကိုတော့ သိထားတာက ကြာပါပြီ။ မေး – Murdoch MBA ကို တက်ရောက်ဖို့ စဉ်းစားရွေးချယ်ဖြစ်ပုံလေးတွေ ပြောပြပေးပါဦး။
ကျွန်တော် အနေနဲ့ MBA ကို မတက်ရောက်ခင် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့… Read More “Phyo Oo Han”
Su Wai Oo
ကျွန်မကတော့ MBA First Batch က ဆုဝေဦး ပါ UFL English နဲ့ ကျောင်းပြီးခဲ့ပြီး Portsmouth University မှ B.E(Civil) ဘွဲ့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ Kaplan ရဲ့ Murdoch MBA ကို join ခဲ့တာ အရင်နှစ်ထဲကပါ အခုတော့ MBA ပြီးသွားပါပြီ။ Kaplan မှာ MBA တက်ခဲ့တာ ကျွန်မအတွက် အမှန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Kaplan မှာသင်တဲ့ ဆရာတွေက အရည်အချင်းလည်း အရမ်းရှိပါတယ်။ ဆရာ Khrishna ဆိုရင် Family လိုမျိုး တပည့်တွေကို သဘောထားပြီး သင်ပေးပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ ရှိရင်လည်း ကူညီပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Murdoch MBA ရဲ့… Read More “Su Wai Oo”
ကျွန်မနာမည် မစိမ်းနွဲ့ဦးပါ။ Proximity Finance Microfinance Company Limited ရဲ့ Head of Finance အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်မ MBA တက်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ ဘယ်ကျောင်းကို တက်ရမလဲဆိုပြီး ကျောင်းပေါင်းများစွာကို Research လုပ်ပြီး ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ကြည့်တာကတော့ ကျောင်းရဲ့ Quality နဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေပေါ့နော်။​ ​စင်ကာပူမှာ နေလာတုန်းကလည်း Kaplan Singapore မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးတာမို့ ကျောင်းရဲ့ အရည်အသွေးကိုတော့ စိတ်ချယုံကြည်ပြီးသားပါ။ Kaplan Myanmar University College ကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ Kaplan Singapore မှာ Murdoch MBA ကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ Star Lecturer တွေကိုယ်တိုင် 100%… Read More “Seinn Nwe Oo”